Nzaghachi maka Iwu TCDD: 'Ha ga-aga n'ihu zoo ndị nwere ibu ọrụ' | RayHaber
HomeTurkeyMpaghara Marmara59 CorluNzaghachi maka Iwu TCDD: 'Ha ga-aga n'ihu zoo ndị nwere ibu ọrụ'
16 / 11 / 2019 59 Corlu, 59 Tekirdag, ụgbọ okporo ígwè, General, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey
ndi n’eme tcdd agha ga aga n’ihu izo
Ministri nke Transportgbọ njem akwadoziela iwu ọhụrụ nke na-arịwanye elu nke ihe mberede ụgbọ ala na-egbu egbu na-adịbeghị anya.
Ministri nke Transportgbọ njem akwadoziela iwu ọhụrụ nke na-arịwanye elu nke ihe mberede ụgbọ ala na-egbu egbu na-adịbeghị anya. Eroğlu si BTS kwuru na bulunmayan Ha ga-aga n'ihu zoo ndị ọrụ bulunmayan ahụ nwere banyere iwu nke na-enweghị ebumnuche maka ịchọpụta ihe kpatara ihe mberede.
Egburu 17 94 na ihe karịrị ụmụ amaala 500 merụrụ ahụ na opekata mpe isii ihe ọghọm ụgbọ ala na-egbu egbu n'oge ọchịchị AKP kwa afọ. Ebubo ahụ nke enweghị nnyocha dị mma banyere ndị ọrụ ọha na-eleghara anya na usoro a adabaghị n'ihe a na-ekwu. Dabere na Hüseyin Şimşek si na Birgün ụbọchị, Minista na-ahụ maka njem na akụrụngwa akwadebela iwu ọhụrụ n'ihe ọghọm ndị a.
N'ime iwu nyocha na nchoputa nke ihe ọghọm na ihe ọghọm nke batara n'ike mgbe ebipụtachara ya na akwụkwọ gọọmentị Gazette, emeghị mgbakwunye na mkpebi nke ndị na-emebi ndụ ụmụ amaala. Mgbe ihe ọghọm dị na ụkpụrụ nke guzobere kọmitii nyocha, iwu nke ndị ọkachamara na kọmitii a iji chọpụta iwu maka nyocha na ịkọsa ihe ọghọm. N'ihi ya, ihe mberede na ihe ngosi ga - abụ ozi ịntanetị ma ọ bụ faksị wee mejupụta akwụkwọ ngosi. A ga-ahọpụta ndị ọkachamara sitere na ndị ọrụ gụsịrị na sistemụ ụgbọ okporo ígwè, ihe owuwu, igwe, ọkụ eletrik, nkwukọrịta, kọmpụta na ngalaba ụlọ ọrụ.
O dighi mmanye
Ndị ọkachamara agaghị eme mkpebi ọ bụla maka mmachibido iwu nke nyocha a kwuru. N'ime iwu ahụ, “akụkọ ndị ahụ edepụtara agaghị edo onwe ha n'okpuru ikike kwesịrị ekwesị. Nkwupụta ahụ ga-agụnye nchịkọta, usoro ihe ọghọm, ozi na nchoputa gbasara ihe ọghọm, ntule na nkwubi na nkwenye. Mkpebi nke nhazi, iwu ma ọ bụ nke mpụ agaghị eme ka isiokwu nke mkpesa ..
Ọkachamara ahụ kwuru na ọ ga-eme nyocha banyere ihe ọghọm ndị a, "ndị ọzọ na-abụghị ndị isi na ndị nwe obodo" enweghị ike ịkekọrịta ebe ọ bụla edepụtara na usoro ahụ. Enwere ntụnye metụtara nchụpụ nke ndị ọkachamara ịme nyocha ahụ gụnyere na ụkpụrụ. Dịka ụkpụrụ ahụ si kwuo, ekwuputara na ndị ọkachamara nke na-eme ihe ga-emebi mmụọ na ntụkwasị obi nke ọrụ na ebumnuche ha chọrọ.
AKANNKỌ AKA NA-AK .ZIRI .B .R.
Taşıma Ọrụ a kwadebere bụ iwu nke enweghị ike igbochi ihe ọghọm nke nwere ike ịdapụta na agaghị enwe ahụ, Ahmet Ekeğlu kwuru, onye otu onye isi na ndị isi oche ndị isi nke United Transport Employees Union (BTS).
N'ikwu na ọ dị mkpa maka ọrụ mgbochi na ihe mberede okporo ụzọ mana na iwu ahụ nwere nnukwu erughị oke n'echiche a, Eroğlu kwuru, orsa Ọ bụrụ na a na-arụ ụdị ọrụ ahụ, ihe kpatara ihe mberede ahụ na ndị mmadụ na-eburu ibu ọrụ kwesịrị ka nyocha ya ma kwadoo ya. Agaghị etinye ndị ezigbo ruru eru na nyocha ahụ. Iwu ahụ hụrụ na omume a ga-aga n'ihu. Anyị kwenyere na enwere ike zoo nsonaazụ nyocha nke ndị nwere ọrụ n'ihi ihe nzuzo na enweghị mmachi. Nchọpụta ahụ, nke abụghị isiokwu nyocha, enweghị isi .. (m Gerçekgünde)
Kwadoro maka ụgbọ elu dị elu
Ha ga-agbagha akwụkwọ ọhụụ site na ịghara ịbanye na İZBAN
BTS: Ihe kpatara mmụba nke ogbugbu azụmahịa…
Tanrıkulu nke CHP maka ndị ọrụ ọghọm Mazị…
TMMOB: Ikike ndi nwere ọrụ dịịrị na Çorlu Train Accident TM
Onye Minista nke Transportgbọ njem si Grace na Nkwupụta TCDD…
TMMOB na BTS mere na mgbazinye ụlọ TCDD Guest House
Actionorlu Train mberede mere maka TCDD sitere n’ezinaụlọ!
Mmeghachi omume na ụgbọ ala ụgbọ elu na Şanlıurfa
Azịza nke Ụgbọ njem si n'aka Izmir Pensioners
Onye isi oche nke Turkish Transport-Sen siri ike si n'oké osimiri Cankesene
Nzaghachi nye ụlọ ọrụ ỊZBAN
Azịza site na Zamma Peker na Sivas
Igwe mmiri ahụ na-ese n'elu mmiri wetara Yenikapı maka Marmaray…
ihe mberede ụgbọ okporo ígwè
Òtù Ndị Ọrụ Na-ahụ Maka Ọpụpụ na United
Ihe ọghọm okporo ụzọ